भारतमा मतगणनाको ताजा अप्डेट: मोदीलाई एक्लै बहुमत, कुन पार्टीको कति सिट ? – Hamrosandesh.com
भारतमा मतगणनाको ताजा अप्डेट: मोदीलाई एक्लै बहुमत, कुन पार्टीको कति सिट ?
जेठ, ९ काठमाडौं ।
भारतमा फेरि नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुने पक्का भएको छ । लोकसभा चुनावको जारी मतगणनामा भाजपा एक्लै बहुमत उन्मुख छ भने उसको गठबन्धन ३४३ सिटमा अगाडि छ ।
मतगणना चलिरहँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको जित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । भाजपा कार्यकर्ताले देशभर खुसी मनाइरहेका छन् ।
चुनावी परिणामबारे कंग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले यसबारे केही बोलेका छैनन् । जारी मतगणनामा कांग्रेस गठबन्धन मात्र ९६ सिटमा अगाडि छ भने अन्य १०६ सिटमा अगाडि छ ।
लोकसभामा बहुमत ल्याउन २ सय ७२ सिट आवश्यक पर्छ । सन् २०१४ को निर्वाचनमा भाजपा एक्लैले २ सय ८२ सिटमा जित हासिल गरेको थियो । यस पटक त्यस भन्दा पनि बढी सिटमा अग्रता लिएको छ ।
अहिले भारतमा सम्पन्न लोक–सभा निर्वाचनको मतगणना जारी छ । साँझसम्म सबै परिणाम आइसक्ने सम्भावना छ । सुरुवाती मतगणनाका आधारमा वर्तमान प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पार्टीले सहजै बहुमत हासिल गर्ने देखिएको छ । त्यस्तै भाजपा नेतृत्वको ‘एनडीए’ गठबन्धनले सहजै ३४४ भन्दा बढी सिट ल्याउने देखिएको छ ।
लोकसभा चुनावको लागि भनेर विहारमा भाजपाले त्यहाँको मुख्यमन्त्री नितिश कुमारको पार्टी जनता दल९युनाइटेड०सँग गठबन्धन गरेको थियो । हाल आएर यो गठबन्धन निक्कै सफल सावित भएको छ । विहारबाट केन्द्रीय संसदमा ४० जना प्रतिनिधि छानिन्छन् ।
ती मध्य ३८ सांसद भाजपा र जनता दल९युनाइटेडको गठबन्धनबाट छानिने सम्भावना देखिएको छ । लालु प्रसाद यादवको राष्ट्रिय जनता दल र कांगे्रसको गठबन्धनले जम्मा २ सिट जित्ने अवस्थामा छ ।
निर्वाचन अघि केही महत्वपूर्ण राज्यमा गठबन्धन निर्माण नगर्नु उनको सबैभन्दा ठूलो भूल सावित भयो । सबैभन्दा धेरै संसदीय सिट भएको उत्तर प्रदेशमा कंग्रेस ‘महागठबन्धन’मा सामेल हुन सकेन । त्यस्तै दिल्लीको आम आद्मी पार्टी र बंगालको त्रिमुल कंग्रेससँग पनि गठबन्धनको लागि प्रयाप्त प्रयास गरेको देखिएन ।